जब देउवालाई कार्यकर्ताले र्‍याखर्‍याख्ती पारे… – Himalaya TV
जब देउवालाई कार्यकर्ताले र्‍याखर्‍याख्ती पारे…
२९ कार्तिक २०७४, बुधबार ०७:४५
काठमाण्डाै, २९ कार्तिक । आधा खुला भएको भुइँतलाको सानो हलमा खचाखच कार्यकर्ता भरिएका थिए कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा ।
सुरक्षाकर्मीलाई भीड मिलाउन हम्मेहम्मे थियो । पार्टी जिल्लासचिव कपिल शर्माले कार्यक्रम सुरु गरे। कार्यकर्तालाई जिज्ञासा राख्न भने। मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापति किरण कोइरालासँग कानमा खुसुक्क भन्दै थिए, ‘केको जिज्ञासा छ र ? ऐले ढिला हुन्छ ? ’ कोइरालाले राख्न दिऊँ भन्ने इशारा गरिन् ।
उनलाई कार्यक्रम सञ्चालक जिल्लासचिव शर्माले जोडबल गरेर बसाउन खोजे पनि कार्यकर्ताले ‘हुटिङ’ नछाडेपछि बसाउन सकेनन्। तर, उनलाई जबर्जस्ती बस्न लगाइयो। अर्का कार्यकर्ता सोमबाहदुर थापा जुरुक्क उठेर एक्कासि कुर्लिए ‘सभापतिज्यू कहिलेसम्म हामीले तपाईंहरूको झोला बोकिरहने हो ? के तपाईंहरू मरेपछि मात्रै हाम्रो पालो आउने हो ? ’
कार्यक्रम सञ्चालकले जबर्जस्ती गरी उनलाई चुप लगाए तीनजना कार्यकर्ता बोलेपछि ‘फ्लोर’ बन्द भयो । त्यसपछि पनि कार्यकर्ता सम्झाउन देउवालाई हम्मे-हम्मे भयो। उनले टिकट वितरण ‘अन्याय’ भएको स्वीकार पनि गरे। ‘हो मलाई थाहा छ, एक से एक दुःख गरेका साथीहरूको नाम छुटेको छ, दुःख मलाई पनि लागेको छ’ प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकर्तालाई सम्झाउँदै भने, ‘तर, पनि यतिबेला चुनाव जित्नु छ, यसरी आफैंभित्र झगडा नगरौं।’
बाम गठबन्धनले लोकतन्त्र सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै देउवाले त्यसकाविरुद्ध फेरि लोकतन्त्रले जित्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले मात्रै लोकतन्त्र जोगाउन सक्छ, त्यसैले अहिले चुनावमा कांग्रेसलाई जिताउन लाग्नुस् हामीले जितेमात्रै लोकतन्त्र रहन्छ। हामी पनि रहन्छौं। नत्र हामी नै रहँदैनौं’ उनले भने।
मंगलबार कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा नेपालगन्ज विमानस्थलमा ओर्र्लिएका थिए। त्यहाँ उनलाई स्वागत गर्न सुरक्षा निकायलगायत धेरै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि पुगे। त्यहाँ जिल्ला सभापति कोइराला पनि पुगेकी थिइन्। तर, उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटिनन्। विमानस्थलभित्र रहेको ‘भिभिआइपी’ कक्षमा बसेका देउवाले जिल्ला सभापति कोइरालालाई भित्र बोलाउन पठाए।
बर्दिया जिल्ला सभापति तथा सिंचाईमन्त्री सञ्जय गौतम बाहिर आएर कोइरालालाई ‘काकी, भित्र जाउँ सभापतिज्यूले बोलाउनुभाछ’ भने। तर, कोइरालाले मानिनन्। उनले जवाफ दिइन् ‘मेरो पनि आफ्नै स्ट्यान्ड छ, म किन उहाँलाई भेट्न जाने ? प्लीज म जान्न त्यही भन्दिनु।’
कार्यक्रम सक्दै उनले अन्तिममा भनिन् ‘पीर, दुःख तपाईं, हामी सबैलाई छ तर, त्यो भन्दा धेरै पीडा र दुःख त्यो बाम गठबन्धनले जितेपछि हुनेछ, त्यसैले जस्तोसुकै पीडा भए पनि यसपटक कांग्रेसले हार्नुहुन्न, म पनि लाग्छु तपाईंहरु पनि पार्टीलाई जिताउन लाग्नुस्। यो खबर अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ ।
जानकारी बिना शेयरमा लगानी नगरौ : अर्थमन्त्री
दिपक मनाङेविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी
छात्रालाई बलात्कार प्रयास गरेकाे अारोपमा ललितपुर प्याब्सनका अध्यक्ष पक्राउ